Burushka Photoshop ugu Fiican: Kuwani Waa Kuwa Adiga Ugu Fiican | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad joogto uga tahay Photoshop, markaa hubaal mid ka mid ah waxyaabaha sida aadka ah kuu xiisaynaya barnaamijka waa burushyada Photoshop. Kaliya maahan inay kuu keydiyaan booska, laakiin waxaad heli kartaa abuuritaanno aad u guuleysta oo ay macaamiishaadu kuu sawiraan, sax?
Laakiin, Waa maxay burushka Photoshop? Maxay yihiin burushka ugu fiican ee Photoshop? Sidee loo isticmaali karaa? Waxaan kaala hadli doonnaa waxaas oo dhan iyo waxbadan oo ka hooseeya si aad fikrad fiican uga hesho waxa ay yihiin iyo wixii ka sarreeya dhammaantood waxay ku siinayaan tusaalooyin burushyada ugu fiican halkaas.
1 Maxay yihiin burushyada Photoshop
1.1 Sida loo rakibo buraashka Photoshop ugu fiican
2 Burushka Photoshop ugu fiican rinjiyeynta
2.1 Burushka Photoshop ee ugu Fiican: Wavenwater
2.3 Burushka Photoshop ugu Fiican: Aaron Griffin
2.4 Burush by LilithDemoness
2.5 Burushka Inkt Brittney Murphy
2.6 Burush macquul ah Eilert Janßen
2.7 Burushka maqaarka dadka
2.8 Burushka Photoshop ugu Fiican: Rinjiyeyn Deg Deg ah
2.9 Buraashka cimilada
2.10 Burushka leh saameyn galaas jaban
2.11 Burushka dhirta
Maxay yihiin burushyada Photoshop
Burushka Photoshop sidoo kale waxaa loo yaqaan burush. Kuwani waa qaabab horay loo sii qorsheeyay oo lagu daray qalabka burushka Photoshop. Waxaa jira kuwa badan oo kala duwan, runtiina waxaad abuuri kartaa taada oo aad la wadaagi kartaa dadka kale.
Waxay u adeegaan Abuur montages iyo halabuur si sawir uga dhigo mid macquul ah ama cajiib ah.
Sida loo rakibo buraashka Photoshop ugu fiican
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad rakibto burushyada aan ka hadlayno xiga, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loogu daro barnaamijka. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah in feylashaasi ku dhammaadaan .abr. Waxa ay tahay inaad sameyso markii burushka la soo dejiyo waa inaad galisaa galka burushka Photoshop. Tani badiyaa, marka loo eego, C: / Faylasha Barnaamijka / Adobe / Adobe Photoshop CC (nooca) / Presets / burush.
Waxaan kugula talineynaa, markii aad halkaas ku haysid, inaad ugu magacawdo ereyo aad aqoonsan tahay, gaar ahaan haddii aad leedahay burushyo badan. Hadda, waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad furto barnaamijka Photoshop oo waxaad heli doontaa aaladda burushka, iyo tabka ka muuqda liiska kore. Waxaad arki kartaa liiska oo dhan si aad u hesho midka aad u baahan tahay.
Burushka Photoshop ugu fiican rinjiyeynta
Maaddaama aan ognahay inaad jeceshahay inaad noqoto mid ficil ah, iyo in waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad ogaato xoogaa qalab ah oo aad ku qaban karto shaqadaada, waxaan ka faalloonaynaa maxay yihiin burushyada Photoshop ugu fiican. Qaar badan oo ka mid ahi waa bilaash, markaa waa inaad heshaa, soo dejiso oo aad bilowdaa isticmaalkeeda. Kuwa kale waa la siiyaa, laakiin way u qalmaan.
Ma rabtaa inaad ogaato kuwa noogu fiican?
Burushka Photoshop ee ugu Fiican: Wavenwater
Burushkan waxaad u isticmaali kartaa adeegsi shaqsiyeedLaakiin haddii aad la xiriirto naqshadeeyeheeda, Michael Guimont, wuxuu ku siin karaa rukhsad ganacsi. Dhexdeeda kama heli doontid hal burush, dhab ahaantii waxaa jira in badan oo kale oo mashruuc kasta siisa natiijo gaar ah.
Sidan uma baahnid inaad si joogto ah u sameysatid buraashyo, laakiin horeyba waad u wada sameysay (ama dhammaantiisba).
El Carles Marsal's Photoshop burush pack waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran halkaas, oo waxay kuu oggolaaneysaa oo keliya inaadan haysan burushyada daruuriga ah, laakiin sidoo kale qaabab isku dhafan, oo u dhexeeya farshaxanka iyo sawir qaadista ...
Mid aad u la mid ah ayaa ah tan Jonas de Ro. Xaqiiqdii, waxaa la sheegaa in Carles Marsal's uu ku saleysan yahay kan kale.
Burushka Photoshop ugu Fiican: Aaron Griffin
Nakhshadeeyeheeda, Aaron Griffin, wuxuu buraashkiisa Photoshop ka dhigay mid bilaash ah oo ganacsi iyo shaqsi ahaanba loo adeegsan karo. Sawir gacmeedkan iyo farshaxan yahan fikradeed waxaa lagu gartaa hal abuurka muuqaalka aadanaha waana dabcan, wuxuu ku bixiyaa "ilaha" bilaash
Haddii aad qaban karto iyaga, ha ka waaban oo ka faa'iideyso, maxaa yeelay mashaariicdaadu aad bay uga fiicnaan doonaan.
Burush by LilithDemoness
Sidoo kale lagu bixiyo lacag la'aan si shakhsi ah iyo adeegsi ganacsi, LilithDemoness, waa magaca uu farshaxankani ku leeyahay DeviantArt, wuxuu ku siinayaa 14 burush, dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin dhibco rinji oo u muuqda kuwo macquul ah, sidaa darteed waad ku dhammayn kartaa shaqadaas baahidaada.
Burushka Inkt Brittney Murphy
Haddii aad raadineyso inaad siiso abuurkaaga dareen khad xaqiiq ah, markaa waa inaad kuwaan isku daydaa. Waa naqshad ku saleysan buraashka ugu fiican Photoshop sidaa darteed waxay umuuqataa in faahfaahinta lagu rinjiyeeyay gacanta, ama inay waligoodba joogeen.
Naqshadeeyeheeda ayaa ah Brittney Murphy waxayna ku siisaa burushyadan bilaash ganacsi iyo adeeg shaqsi. Kuwa aad ka hesho waxaa ka mid ah wasakhda dheeha, khadadka qaro iyo dhuuban, iwm.
Burush macquul ah Eilert Janßen
Burushkan Eilert Janßen sidoo kale waa bilaash, haddii aad ugu isticmaasho mashaariic shaqsiyeed ama ganacsi. Waxay ka kooban yihiin 12 buraash oo sawirradaada siin doona dareen sidii haddii lagu calaamadeeyay calaamadeeye.
Dabcan, maahan kuwa kaliya ee naqshadeeyehani leeyahay, waxaa jira In ka badan 300 burush calaamadaha la awoodi karo oo ku habboon qoraallada, naqshadaha warshadaha ama moodada.
Burushka maqaarka dadka
Ma u baahan tahay inaad sawir ka bixiso dareenka maqaarka dadka? Hagaag, ha ka waaban, halkan waxaad ku leedahay ikhtiyaarkan. Waa abuuritaan adeegsade env1ro ah oo kaliya u fidiya adeegsi shaqsiyeed (ganacsiga waa inaad u qortaa isaga).
Farshaxanistahan reer Poland wuxuu abuuray buraashka si uu u rinjiyeeyo maqaarka dadka, laakiin waxay ku habboon yihiin taabashada ama qurxinta.
Burushka Photoshop ugu Fiican: Rinjiyeyn Deg Deg ah
Haddii aad rabto qaar ka mid rinjiyeyn deg deg ah, kuwan uu qoray Darek Zabrocki waa kuwo hagaagsan. Haddii aadan ogeyn, naqshadeeyehani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka, gaar ahaan tan iyo markii uu ka soo shaqeeyay shirkado sii daayay ciyaaro sida Halo Wars 2, Cassassin's Creed or Magic: The Gathering.
Hadda, waxay ku siinaysaa adiga xoqin buraashkaaga, shaqsi ahaan iyo adeegsi ahaanba.
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad siiso muuqaal kale sawir, sawir ama sawir, burushkan waad ku guuleysan kartaa. Abuuraha waa DeanOyebo waxaana loo heli karaa ganacsi iyo adeegsi shaqsiyeed. Xaqiiqdii, sawirka uu soo bandhigay farshaxanku wuxuu muujinayaa in lagu abuuray buraashka xirmada bilaashka ah.
Burushka leh saameyn galaas jaban
Qaadashada sawir uu qofku muraayad ku jebinayo waa fiican tahay. Laakiin hadda maahan inay run ahaato mahadnaq burushyada tan iska shabahaya. Waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan, Kaliya waa inaad heshaa midka kugu habboon waxa aad rabto.
Miyaad qiyaasi kartaa inaadan u sawiri doonin dhir laakiin u isticmaalayso burush? Hagaag, taasi waa waxa abuuritaankan uu sameeyay B Silvia. Iyagu waa bilaash (adeegsi shaqsiyeed iyo ganacsi, inkasta oo ay u baahan tahay caddeyn lahaansho).
Internetka waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah burushyada Photoshop ugu fiican. Kaliya waa inaad waqti u hurto si aad u hesho waxa aad raadineyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Burushka Photoshop ugufiican